Imangbọ elu ụgbọ elu Biman ụgbọ elu na-agba ọsọ n'okporo ụzọ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu Yangon, gbawaa atọ
Home » Nchedo njem na Mberede » Imangbọ elu ụgbọ elu Biman ụgbọ elu na-agba ọsọ n'okporo ụzọ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu Yangon, gbawaa atọ
Nwere ike 8, 2019
Bgbọelu Biman Airlines 'Bombardier Dash-8 agbachapụla n'okporo ụzọ ụgbọ elu nke ọdụ ụgbọ elu mba Yangon dị na Myanmar, tufuo nku ya wee gbajie ụzọ atọ. Ndị ọkwọ ụgbọ elu na-anwa ịdata dịka ihe mberede ahụ mere.
Agbanyeghị na akụkọ dị iche iche na-emegiderịta onwe ha, otu onye na-ekwuchitere Biman Airlines gwara BDnews na saịtị Bangladesh na mmadụ anọ merụrụ ahụ, gụnyere onye ọkwọ ụgbọelu.
Foto e kesara na soshal midia na-egosi ókè mbibi ahụ ruru.
Planegbọ elu a na-efedata n'ọdụ ụgbọ elu Yangon mgbe ihe mberede a mere, ka o si na ọdụ ụgbọ elu mba Dhaka-Srahjalal nke Bangladesh fega. Ọnọdụ ihu igwe adịghị mma, onye na-ekwuchitere ụgbọ elu Biman kwuru na nke a butere mkpọka ahụ.
Gbọelu ahụ bụ nke Biman Bangladesh Airlines, onye na-ebu ọkọlọtọ nke Bangladesh. E wezụga ịnwa ịnwa ịnwa ohi na February, ụgbọ elu ahụ enwebeghị ihe ọghọm ma ọ bụ nsogbu nchekwa n'ime afọ iri.
Emechiela ọdụ ụgbọ elu Yangon mgbe ọdachi ahụ mechara, ebugharịla ụgbọ elu na-abata.
Onye isi ụlọ ọrụ Silicon Valley Tech ghọrọ CTO maka ụlọ nkwari akụ Bidroom
Na-achọgharị maka nzube? United Airlines na-enyere ndị na-agba ịnyịnya ígwè AIDS / LifeCycle aka